Uyini umehluko phakathi kosonhlalonhle nosonhlalakahle? | Ukwakheka nezifundo
UMaite Nicuesa | 21/05/2021 23:05 | Amathiphu
Kunamaphrofayili ahlukahlukene asebenza ku- ukuzimisela komphakathi, unikeze ukusekelwa kubantu abasezimo ezisengozini. Kodwa-ke kukhona amaphrofayli okuthi, yize ethuthukisa umsebenzi wabo emkhakheni ofanayo, ahluke kuma-nuances abalulekile.
Njengoba leli gama ngokwalo likhombisa, umqondo wosonhlalonhle ubhekisa osizweni. Le yindlela esetshenziswayo ekwenzeni lo msebenzi. Usizo luba yindlela yosizo ehlukanisa lo msebenzi. Kodwa-ke, ulimi luyaguquka futhi, njengamanje, igama elithi usonhlalakahle lisetshenziswa kakhulu ukwazisa umsebenzi owenziwe yile phrofayili.
1 Izindlela ezahlukahlukene zokuqonda ziyasiza
2 Ufundani usonhlalonhle?
3 Izinzuzo zesenzo senhlalo
Izindlela ezahlukahlukene zokuqonda ziyasiza
Ngokuvamile, bobabili ochwepheshe basebenza eqenjini, bayingxenye yamaphrojekthi ahlukahlukene akhiwa ngamaphrofayili ahambisanayo. Bonke bangeza eqenjini elenza imikhakha eyahlukene, ngoba iqiniso elifanayo lingasondelwa ngezindlela ezahlukahlukene. Ngemuva kokuthola ukuxilongwa kwesimo esiyinkimbinkimbi, ochwepheshe bakha uhlelo lokungenelela ukuze banikeze ukuxhaswa okwanele eqenjini elithile noma kumuntu othile.
Wonke umuntu unamalungelo nezibopho emphakathini. Kodwa-ke, amalungelo omuntu angaphulwa njengokungathi othile ubengabonakali. Ngalesi sizathu, usonhlalakahle usebenza ukuvikela amathuba alinganayo ngoba lokhu kulingana nakho kuyisihluthulelo ekuguqukeni kwabo bonke. Kwesinye isikhathi ukungenelela kwenzeka ngenxa yesimo esihlonziwe, esiphakamisa isidingo sosizo. Kepha ukuvimbela kubalulekile ekuthuthukiseni intuthuko yezenhlalakahle nenhlalakahle.
Lokhu kungenye yomehluko esingayithola nomsebenzi wezenhlalakahle. Ayikho indlela eyodwa eyenza uchwepheshe akwazi ukwenza lo mthwalo ebhizinisini losizo olukhethekile. Uchwepheshe angathatha iziqu zaseyunivesithi, kepha kukhona nethuba lokukhetha uhlelo Lokuqeqeshelwa Umsebenzi. Kufanele kuvezwe lokho amanye amaphrofayli afunda iDegree in Social Work eyunivesithi. Kepha iVocational Training, enendlela ebabazekayo, futhi inikela ngamathuba emisebenzi kulo mkhakha.
Amagama osonhlalonhle kanye nosonhlalakahle abonisa iqiniso elifanayo ekwenzeni impilo yansuku zonke. Eqinisweni, asetshenziswa njengokungathi ayimvumelwano ngolimi lwansuku zonke. Ngaphandle kokungabaza, into efaneleke kakhulu ukuhambisana nabantu abasesimweni sengcuphe noma sengozini. Kepha ulimi ngokwalo lukhombisa umehluko omkhulu. Indlela ethathwe ngumsebenzi wezenhlalakahle isuka enhlalakahleni Okwangempela ukwandisa amandla abo kulabo, ngalolu sizo, abathola ezinye izinsiza namathuluzi.
Ngale ndlela, umuntu othola usizo uyena ophambili wenqubo yabo yokwenza ngcono isikhathi eside. Ngokuya ngalokhu kusekelwa, banamakhono amasha wokubhekana nezimo zansuku zonke nobunzima.
Izinzuzo zesenzo senhlalo
Isenzo senhlalo sibalulekile ukuthuthukisa okuhle okuvamile. Futhi izinsizakalo ezikhethekile kule ndawo zikhuthaza inhlalakahle. Ngakho-ke, umehluko omkhulu phakathi kobungcweti esiwuhlaziya kulesi sihloko awuhlali kangako emithwalweni etholwa yisisebenzi ngasinye, kodwa ekuguqukeni kolimi uqobo emlandweni wonke. Ukuziphendukela kwemvelo nakho okukhombisa ukuguqulwa komphakathi nokuzwela okusha.
Usonhlalonhle uqondisa futhi ahambe nabantu noma imindeni. Futhi sebenzisa izinsizakusebenza ezitholakalayo ukuhlinzeka ngalokhu kusekelwa. Noma ngubani odinga usizo angaxhumana nosonhlalakahle endaweni yakhe acele imininingwane ngesihloko esithile. Kodwa-ke, njengoba sike saphawula phambilini kule ndatshana ku-Training and Studies, ukugxila kwalolu sizo akuyona inhlalakahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Amathiphu » Uyini umehluko phakathi kosonhlalonhle nosonhlalakahle?